Shir Lagu Xalinayo Tabashada Beesha Leelkase oo Garoowe Ka Furmay | SAHAN ONLINE
Shir Lagu Xalinayo Tabashada Beesha Leelkase oo Garoowe Ka Furmay
Waxaa maanta ka furmey magaalada Garoowe shir ay soo qaban-qaabiyeen waxgaradka beesha Leelkase. Shirka ayaa looga hadley tabashada beesha Tanada Darood (Leelkase) ee awood qaybsiga Puntland.
Beeshu waxay shirka ku casuntey qaar kmaid ah Isimada Puntland, waxaana halku dhig looga dhigey: “Shirka Isimada Puntland ee xalinta tabashada beesha Tanade Daarood ee golaha wakiilada Puntland”
Suldaan Jaamac Maxamed Shire ayaa saxaafadda u sheegay in shirkan ay soo qaban-qaabisey beesha Tanade Daarood (Leelkase) kuna saabsan yahay tabasho beeshu ka qabto awood qaybsiga guud ee Puntland, khaastan maanta waxaa loo fadhiyaa ayuu yiri awood qaybisga golaha wakiilada. Suldaan Jaamac ayaa sheegay in waxa shirka ka soo baxa gadaal laga faah-faahinaayo.
Beesha Tanade Daarood ayaa golaha Wakiilada Puntland ku leh 3 Xildhibaan oo laba kamid ah ay ka soo galaan Gobolka Mudug.
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Gaas ayaa bishii Abril 2017 u gudbiyey Afhayeenka Baarlamaanka Puntland Axmed Cali Xaashi in qodobo kamid ah dastuurka wax laga beddelo gaar ahaan qodobka 60aad ee dhigaya tirada Xildhibaanada Baarlamaanka iyo in aan la beddeli karin ilaa la helo tirakoob rasmi ah.
Xildhibaano aad u tira badan oo ka tirsan golaha wakiilada Puntland ayaa bishii Maajo 2017 soo saarey baaq ay ku sheegayaan in aan la furi karin tirada Baarlamaanka ilaa tirakoob sax ah la helo haddii sidaas la sameeyana uu noqonayo albaab dhibaato oo la furay.
Baarlamaanka Puntland ayaa lagu qaybsadey shan gobol iyo deegaanka Buuhoodle, sanadkii 1998, tirada la qaysbadey ay ahayd 66 Xildhibaan iyada oo lagu jaangooyey Xildhibaanadii gobolkastaa lahaa Dowladii rayidka ahayd ee ka horeysey Inqilaabkii 1969, oo lagu dhuftey 2% kororka tirada dadka. Beelaha dega gobolka Mudug ayaa beesha Cumar Maxamuud iyo Leelkase midkiiba laba xubnood qaateen halka beelaha kale la siiyey midkiiba xubin, tirada guud ee gobolka Mudug oo axdigii Puntland lagu dhisey loogu yeeray Waqooyiga Mudug ayaa ah 10 Xildhibaan.
Waxaa la is weydiinayaa in shirkan uu gadaal ka riixayo Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Cali Gaas oo isagu si weyn u doonaayey in dastuurka wax laga beddelo, inkasta oo Dastuurku tilmaamayo qaabka wax looga beddeli karo ayey ahayd sharci darro in Madaxweynaha keligiis uu codsi u diro Xildhibaanada.
Lama oga qaabka beeshu ay wax ku raadineyso, ma gobolka Mudug ayey u doonayaan in xubno dheeraad ah la siiyo si ay dib ugu qaybsadaan beelaha dega Waqooyiga Mudug, ma qaybsigii hore ayaa khaldanaa oo ay doonayaan in 10-ka Xildhibaan ee Mudug dib loo qaybiyo, mise nidaam beel ahaan ah oo keliya ayey wax ku raadinayaan. Saamiga gobolada la siiyey ayaa beeluhu dhexdooda ku qaybsadeen degmooyinka beeluhu kala degaan iyo sida ay ugu kala badan yihiin.
Waxaa jira beelo aad u badan oo iyaguna ka cabanaya in saamiga ay ku leeyihin Puntland ay tahay mid aan jirin ama aad u yar kuwaas oo qarkood Xildhibaano ku leeyihiin golaha wakiilada ama aysan kuba lahayn, waxaana aad u adag haddii la furo albaabkaas in dib loo xiro.
Axdigii lagu dhisey Puntland 1998 ayaa siyaasi u dhashey beesha Tanade Daarood siinaayey xubin sharafeed in uu yahay oo ka tirsan golaha Wakiilada, aanse la beddeli karin, inta laga asteynayo dastuur Puntland yeelato sida ku cad lifaaqa Axdigii Puntland lagu dhisay.